Moa ve ny fihenam-bidy manome lanja marika iray mihoatra ny maimaim-poana? | Martech Zone
Moa ve ny fihenam-bidy manome lanja marika iray mihoatra ny maimaim-poana?
Talata, Martsa 17, 2015 Talata, Martsa 17, 2015 Douglas Karr
Nanana fifanakalozan-kevitra tsara momba ny famelabelarako ho avy ato amin'ny Social Media Marketing World momba ny karazana tolotra azonay omena an'ireo olona nanatrika ny fotoam-pivoriako na ilay hetsika iray manontolo. Ny resaka dia tonga tamin'ny fihenam-bidy na safidy maimaim-poana na mety hampihena ny asa homenay na tsia.
Ny iray amin'ireo lesona nianarako dia hoe rehefa apetraka ny vidiny dia apetraka ny sandany. Tsy maninona izay karazana valiny azontsika matetika, fa saika hiverina aminay foana izy ireo do ary inona izy ireo mandoa antsika raha hanao raha oharina amin'ny mpivarotra hafa. Ka - raha manome fihenam-bidy amin'ny mpanjifa izahay ho an'ny tetik'asa voalohany omenay, dia tsy mbola nahita azy ireo nifidy tetikasa faharoa izy ireo tamin'ny vidiny feno. Izahay no diso… nanamavo ny asanay izahay tamin'ny alàlan'ny fihenan-danja ny fifandraisanay amin'ny voalohany.
Ny fihenam-bidy lalina dia manome lanja ny vokatra na serivisy, mametra ny fahafahan'ny orinasa mampiakatra ny vidiny. Rafi Mohammed, HBR Atsofohy ny fihenam-bidy.
Herinandro vitsivitsy lasa izay, nifanakalo hevitra momba izany tamin'ny namako James izay manana iray aho Indianapolis pizzeria. Nilaza tamiko izy fa aleony manome toy izay mihena. Ny olona manandrana ny sakafo maimaimpoana dia mahatsapa ny lanjan'ireo sakafo fa ireo izay tonga tamin'ny tolotra tapakila dia tonga ho an'ny fifanarahana fotsiny - fa tsy ny kalitaon'ny sakafo. Ny kupon dia manambany ny vokatra sy ny serivisy ka najanon'i James ny fanaovana azy ireo.
Satria mino ny mpanjifa fa ny sandan'ny vokatra maimaim-poana dia mety hifanaraka amin'ny sandan'ny vokatra novidina, ny fampifangaroana vokatra maimaim-poana miaraka amina vokatra avo lenta dia mety hampiakatra be ny fiheverana ny sandany. Mauricio M. Palmeira (Monash University) ary Joydeep Srivastava (University of Maryland) via Rahoviana no mieritreritra ny mpanjifa fa sarobidy kokoa ny freebie iray noho ny vokatra mihena?
Izany no antony maimaim-poana ny fandefasana dia malaza amin'ny tranokala ecommmerce. Raha tokony hanambany ny vokatra amidinao ianao dia manome zavatra ankoatr'izay - foto-kevitra tsotra ho azon'ny mpanjifa nefa tsy manambany ny vokatra na serivisy.
Mazava ho azy fa tsy anecdotal ny valiny. Fantatsika fa rehefa mifampiraharaha amin'ny fifampiraharahana isika dia tsy maintsy mandeha fa tsy mihena. Na azontsika atao ny mamaritra raha misy vokatra na serivisy fanampiny azontsika ampiana. Ohatra, ny mpanjifanay dia mahazo tatitra Google Analytics isan-kerinandro sy isam-bolana izay mametraka ny GA ho tatitra tena tsara sy azo vakiana izay mahafinaritra ho an'ny topy maso mpanatanteraka. Na dia mandoa ny serivisy aza izahay, dia sandam-bola fanampiny izay hatolotray an-tsitrapo izany raha mbola mandoa vola amin'ny serivisy omena anay.
Ho an'ireo orinasan-teknolojia marketing, azoko atao ny manoro ny fitsarana maimaimpoana amin'ny fihenam-bidy isan'andro. Avelao ny fisedrana ny mpanjifa hitondra ny sehatra misy anao ary hahita ny sandany ho azy ireo - ary avy eo dia handoa an-kafaliana ny serivisy izy ireo.
Manisy fihenam-bidy ve ianao? Mahita valiny hafa ve ianao?
Tags: tapakiladevaluefihenam-bidyfihenam-bidy mifanohitra amin'ny maimaim-poanamaimaim-poana
Fanaraha-maso ny fanentanana: Serivisy mailaka matanjaka ho an'ny masoivoho na orinasa
Ny Message Cloud dia manambatra ny fandefasana hafatra amin'ny adiresy finday
Mar 17, 2015 ao amin'ny 8: PM PM
Eny. Tsy mihena mihitsy aho.
Mar 18, 2015 amin'ny 5: 06 AM
ny fihenam-bidy lehibe lalandava dia resaka mampisafotofoto ny vidiny ka mihena ny fitokisana